नेपालको परिचय, गौरव र इतिहास हो धरहरा : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली | सुदुरपश्चिम खबर
नेपालको परिचय, गौरव र इतिहास हो धरहरा : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा नेपालको परिचय, गौरव र इतिहाससँग जोडिएको बताएका छन्। नवनिर्मित धरहरा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुननिर्माण गर्दा विगत झल्कने र आधुनिकता टल्कने हुनुपर्ने अवधारणा राखेको बताए।
‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’अभियान आफूले शुरु गरेपछि २४ करोड रुपैयाँ रकम सहयोग उठेको बताउँदै फेरि नयाँ अभियानअनुसार निर्माण भएको उनले बताए। धरहराको भग्नावशेष हेर्दा आफ्नो इतिहास नै खण्डहर भएजस्तो लाग्ने टिप्पणी गरे।
‘धरहरा ढल्दा किन हामी आफैँ ढलेजस्तो लाग्छ। र धरहराको भग्नावशेष हेर्दा आफ्नो इतिहास नै एउटा खण्डहर भएकोजस्तो लाग्छ। किन हामी धरहरा उठ्दा आफै फेरि बौरिएजस्तो लाग्छ ? किनकी हाम्रो भावना र गौरवसँग जोडिएको छ।’, प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘पुननिर्माण गर्दा भरसक हाम्रो इतिहास र गौरव झल्कियोस् र आजका आधुनिकता पनि टल्कियोस् भन्नेमा ध्यान दिने गरी बनाएका छौं।’
ओलीले आधुनिक प्रयोगबाट अब नढल्ने गरी धरहरा बनाउन जोड दिएको स्मरण गरे। ओलीले धरहराको टुप्पोमा पुग्दा आफूलाई फ्रान्सको आइफल टावर चढेको जस्तै स्मरण भएको बताए।
उनले २०७८ साल सडक बालबालिका मुक्त नेपाल बनाउने घोषणा गरेका छन्। नेपाली भिख माग्ने जाती हुन नसक्ने भएकाले आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने बताए। ओलीले आफूलाई चाहिने चीज आफैं उत्पादन गर्न सक्ने हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले हरेक क्षेत्रमा अन्यन्त तीव्र गतिमा काम गर्न सरकार लागी परेको प्रस्ट पारे।
भूकम्पको ६ वर्षपछि ठडिएको २२ तले धरहराको शनिबार (वैशाख ११) गते लोकतन्त्र दिवसको दिन ओलीले उद्घाटन गरेका हुन्। उनले सम्उद्घाटनको सुरुमा धरहराको प्रवेशद्वारमा राखिएको शिलालेख अनावरण र त्यसपछि ढोकामा राखिएको रिवन काटेर धरहराको २० औं तलामा रहेको बाल्कुनीमा पुगेर पुष्पवृष्टि गरेका थिए।
६ वर्षमा भत्किएको धरहरा यथावत् राखेर नजिकै अर्को धरहरा बनाइएको छ। विसं २०७४ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । विसं. २०७५ असोज १४ गते प्राधिकरणले धरहरा पुनःनिर्माण शुरु गरेको थियो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला २०७२ फागुन ४ गते केपी शर्मा ओलीले ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’अभियान शुरु गरेका थिए।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले ध्वस्त बनाएको ऐतिहासिक धरहरा जीआईईटीसी–रमन जेभीले धरहराको पुनर्निर्माणको काम भ्याटसहित तीन अर्ब ४८ करोडमा बनाइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। अब बन्ने धरहरा क्षेत्र करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ।
जमिनमाथिबाट गजुरसहित धरहराको उचाइ ८३.८५ मिटर छ। भूमिगत तलासहित ९२.२५ मिटर हुन्छ। धरहराभित्र २ वटा लिफ्ट हुनेछन्। एकपटकमा १० जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन्। यसबाट वृद्धवृद्धा एवं अपांगता भएका व्यक्ति धरहरामाथिको पहुँचमा सहजता हुनेछ। साथै फलामको भ¥याङ पनि रहनेछ। धरहराबाट वरिपरिको दृश्यावलोकनका लागि २० औं तल्लाबाहिर २.५ मिटर चौडाइको बार्दली रहेको छ।
२२ औँ तलामा पुरानो धरहराबाट झिकी सुरक्षित राखिएको शिवलिङ स्थापना गरिएको छ। धरहरामुनिको दुई तले भूमिगत संरचनामा दुईवटा विद्युतीय स्वचालित भ¥याङ’बाट तलमाथि गर्न सकिनेछ। (annapurnapost बाट सभार)
डोटीमा एकै परिवारका २ जना दाजुभाईको कोरोनाका कारण मृत्यु !!
उनी जान र आउन ठिक्क छन : धर्मानन्द भट्ट